BFM Radio Station To Focus On Dogs And Disability Soon
[Video & Bergambar] Pantai Teluk Lipat, Dungun Teruk Dilanda Hakisan
melayu cantik... mat salleh agree... Part 2
Dato Seri Shahrizat Abdul Jalil using Fusionexcel !
Paderi, Aziz Bari: Artikel 153 jaga hak rakyat jelata!
Officiating Heritage Photography Exhibition
Wacana Diskopi: Negara, Masharakat Warga dan Moral – Sejauh mana tugas negara dalam soal moral
Posted: 26 Dec 2011 11:36 AM PST
#1: The hamburger shop.
Universal Studios Singapore: Random & Going Home – Well, this gonna be my last post about Universal Studios Singapore and I'll let the random photos taken in USS speak for itself. To be honest, Universal Studios Singapore is really small, you can finish walking around it within hours and done all the ride too if there's not many people.
Overall, it'sagood experience though as I've never been to famous theme park like this. I would like to visit those with more roller coaster and bigger one like Six Flag and Disneyworld in Orlando, FL, USA and Universal Studio Tokyo and more.
#2: Steven Spielberg's Light's Camera Action.
#3: You can see Steven Spielberg's special effect in there
#4: The street.
#5: Brother and me.
#6: Brother and his girlfriend.
#7: Futuristic hotel at far end andamini lake, combining the western themed building. Cool.
#8: Shrek's palm.
#9: Yum yum pop corns.
#10: Clapping hands.
#11: Daddy O's singing.
#12: Hot Mel's Dinettes.
#13: Big fat Kungfu Panda.
#14: Betty! Weird hairstyle by the way.
#15: Asian's Marilyn Monroe. HAHA. Came back from the dead in Asian form.
#16: Road Runner's girlfriend.
#18: Fake Beverly Hills. Noob.
#19: Thank you and bye bye. Took us half an hour to queue for the freaking long monorail. Why everyone want to go back at the same time?
One thing, I forget to mention is that the Monster Rock musical show was awesome. Don't miss it in Universal Studios Singapore. Bye bye.
Previous: Cute Madagascar!
Posted: 26 Dec 2011 10:49 AM PST
#1: The Madagascar Land, notice the right side, by Maybank. HAHA.
Universal Studios Singapore: Cute Madagascar! – After Far Far Away will be Madagascar. I bet many of you know about the movie Madagascar, it is also one of my favourite animation film and always remember the "I like to move it move it". There's alsoafew rides here,amerry-go-round with all the Madagascar character instead of horses, andawater ride which takes you throughajourney of Madagascar.
#2: Everyone busy taking photos.
At here, you will also getachance to meet with the Madagascar character and take photos with them. I see the Alex, Marty, Julien and the penguins. All are very cute and when they came out, everyone was busy taking photos of them.
They dance and they sing. Later then we queued up to take photos with them. =D
#4: King Julien. HAHA.
#5: Skipper and friends.
#7: Me, brother Yik Hung, King Julien and brother's girlfriend Ye Qing.
Previous: Waterworld Presented By Singtel
Posted: 26 Dec 2011 10:18 AM PST
#1: Presented by Singtel.
Universal Studios Singapore: Waterworld Presented By Singtel – Every attractions in Universal Studios Singapore are presented by some big company. Haha, and this one is by Singtel. It makes me feel funny because you can see different branding at there. LOL.
Back to the attractions – Waterworld is actuallyashow based on the blockbuster film "Waterworld". I have not watched the movie before. The show actually features live action stunt with fire, explosion, acting, wave, and water splashing around. =D
Not bad, you walked into the sheltered setting with ang-mo (caucasian) actors doing stunts, jumping here and there and climbing up and down. Before the show start, they interact with us and play game with us.
Then the show start. Jet skies, motor boat moving here and there. Then explosion, smokes, and fake gun shots.
I was pretty amazed on how they move around and do stunts withinasmall setting.
Previous: Lost World & Far Far Away
Next: Cute Madagascar!
Posted: 26 Dec 2011 10:01 AM PST
#1: The Lost World Jurassic Park, not as big as in the movie. HAHA.
Universal Studios Singapore: Lost World & Far Far Away – Previously, I showed you about the Sci-Fi City and now bring you to The Lost World & Far Far Away. Very sad on that day was that Rapid Adventure was closed for repair. It's the water rides that will get you all wet, rushing down the stream.
#2: Two dinosaurs and3eggs.
I feel nothing much at there because couldn't get to play the Rapid Adventure, so it's just walk around, see fake dinosaur and dinosaur egg, as well as ride the mini Canopy Flyer to getagood view of Universal Studios on higher level.
#3: Playing water at the dinosaur's egg seems fun.
Then wait for the time to come to see the WaterWorld water show which was pretty awesome and will share with you in another post. I am more interested into high speed ride although there'sarock climbing called Amber Rock Climb which we didn't experience.
#4: Entrance to the Far Far Away looks very fairytale.
After The Lost World is the Far Far Way withamore fairytale theme featuring Shrek 4-D Adventures, Donkey Live, Magic Potion Spin and Enchanted Airways.
#5: Hello Fairy Godmother.
We had our lunch here randomly at the Friar's Good Food which I think so-so only. Then went to queue for Shrek 4-D Adventure. The queue was longer than other ride, luckily there's air-con and fan at the queuing area.
#6: The castle.
The Shrek 4-D Advernture was pretty funny and you can experienced some weird scent, shaking chair, water spray and something touching your leg. Haha. Brother told me that it's the same at Universal Studios in USA.
#7: Friar's Good Food. So-so only the food.
#8: Taking photos.
#9: Disneyland's seems prettier.
It got hot and sunny at here as there's less shade at Far Far Away and perspiration beats out of the pore.
#10: Me and brother.
#11: Random man talking on the phone. Yo, what's up, why are you looking at the cam?
#12: Far Far Away.
We actually came to Far Far Away twice because we were bored and done all the famous rides by afternoon. So we went to Donkey LIVE, an interactive music show.
#13: The worker at Universal Studios Singapore.
#14: Donkey Live!
I thought it's real donkey or some human-in-donkey-costume but it's actuallyaTV projection with an interactive donkey on screen. Haha.
Previous: Sci-Fi City & Roller Coaster
Posted: 26 Dec 2011 09:36 AM PST
Universal Studios Singapore: Sci-Fi City & Roller Coaster – First stop of my recent Universal Studios Singapore trip is the Sci-Fi City's roller coaster ride – the Cylon and Human. We were actually walking fast to the place as we were afraid of long queue but found out the queue was rather short.
We needed to keep all our stuff on the temporary locker located beside the roller coaster because nothing are allow to place in the pocket. Locker storing only up to half an hour. Then we walked into the roller coaster queuing area, and I got to tell you that the line is very long into it. Haha. Feeling nervous and excited.
It's not scary as seen at there. It's fast, but not fast enough, it's high but not high enough. End up, we rode this rides four times, two each for Cylon and Human. I like the blue one more as it turns 360 degree. I thought I would throw up after my curry puff breakfast, but everything was fine. It's just not scary enough. HAHA
There'salight ride called the Accelerator and it's spinning cup withafuturistic round seating design.
This ride is more for the kids as it's not very fast and doesn't feel dizzy after riding it. One thing about the roller coaster is that the track is not long enough as the whole thing ends withinafew minutes. Very fast. Haha.
Previous: Visiting The Theme Park
Next: Lost World & Far Far Away
Posted: 26 Dec 2011 08:57 AM PST
Warning: file_get_contents(http://api.bitly.com/v3/shorten?login=tursiainfo&apiKey=R_fe7284ee32bc962288b562dc8aaf9c85&longUrl=http://lucialai.org/2011/12/27/christmas-joke-from-the-dpm/&format=txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/lucialai/public_html/wp-content/plugins/share-it/share-it.php on line 53
"If one does not like the agreement made when the country was formed, then might as well do not beacitizen in this country. Findabetter country than Malaysia," he said.
LISTENERS to business radio station BFM in the Klang Valley will be able to hear two very interesting topics in the coming new year.
And PETPOSITIVE's President, Anthony SB Thanasayan is scheduled to be the special guest on both the special slots on the independent 24-hour broadcast.
BFM's popular The Evening Edition talk show that is aired 'live'
It is 2:00 in the morning and most of our men are asleep in their dugouts—yet I could not sleep myself before writing to you of the wonderful events of Christmas Eve. In truth, what happened seems almost likeafairy tale, and if I hadn't been through it myself, I would scarce believe it. Just imagine: While you and the family sang carols before the fire there in London, I did the same with enemy soldiers here on the battlefields of France!
But whataterrible waiting it has been! Knowing that any moment an artillery shell might land and explode beside us in the trench, killing or maiming several men. And in daylight not daring to lift our heads above ground, for fear ofasniper's bullet.
Through all this, we couldn't help feeling curious about the German soldiers across the way. After all, they faced the same dangers we did, and slogged about in the same muck. What's more, their first trench was only 50 yards from ours. Between us lay No Man's Land, bordered on both sides by barbed wire—yet they were close enough we sometimes heard their voices.
During the day, there was little shelling or rifle fire from either side. And as darkness fell on our Christmas Eve, the shooting stopped entirely. Our first complete silence in months! We hoped it might promiseapeaceful holiday, but we didn't count on it. We'd been told the Germans might attack and try to catch us off guard.
I went to the dugout to rest, and lying on my cot, I must have drifted asleep. All at once my friend John was shaking me awake, saying, "Come and see! See what the Germans are doing!" I grabbed my rifle, stumbled out into the trench, and stuck my head cautiously above the sandbags.
"What is it?" I asked in bewilderment, and John answered, "Christmas trees!"
This carol may not yet be familiar to us in Britain, but John knew it and translated: "Silent night, holy night." I've never heard one lovelier—or more meaningful, in that quiet, clear night, its dark softened byafirst-quarter moon.
British and German harmonizing across No Man's Land! I would have thought nothing could be more amazing—but what came next was more so.
"English, come over!" we heard one of them shout. "You no shoot, we no shoot."
There in the trenches, we looked at each other in bewilderment. Then one of us shouted jokingly, "You come over here."
To our astonishment, we saw two figures rise from the trench, climb over their barbed wire, and advance unprotected across No Man's Land. One of them called, "Send officer to talk."
I saw one of our men lift his rifle to the ready, and no doubt others did the same—but our captain called out, "Hold your fire." Then he climbed out and went to meet the Germans halfway. We heard them talking, andafew minutes later, the captain came back withaGerman cigar in his mouth!
"We've agreed there will be no shooting before midnight tomorrow," he announced. "But sentries are to remain on duty, and the rest of you, stay alert."
Across the way, we could make out groups of two or three men starting out of trenches and coming toward us. Then some of us were climbing out too, and in minutes more, there we were in No Man's Land, overahundred soldiers and officers of each side, shaking hands with men we'd been trying to kill just hours earlier!
"Because many have worked in England!" he said. "Before all this, I wasawaiter at the Hotel Cecil. Perhaps I waited on your table!"
He told me he hadagirlfriend in London and that the war had interrupted their plans for marriage. I told him, "Don't worry. We'll have you beat by Easter, then you can come back and marry the girl."
He laughed at that. Then he asked if I'd send herapostcard he'd give me later, and I promised I would.
Another German had beenaporter at Victoria Station. He showed meapicture of his family back in Munich. His eldest sister was so lovely, I said I should like to meet her someday. He beamed and said he would like that very much and gave me his family's address.
Newspapers too changed hands, and the Germans howled with laughter at ours. They assured us that France was finished and Russia nearly beaten too. We told them that was nonsense, and one of them said, "Well, you believe your newspapers and we'll believe ours."
Clearly they are lied to—yet after meeting these men, I wonder how truthful our own newspapers have been. These are not the "savage barbarians" we've read so much about. They are men with homes and families, hopes and fears, principles and, yes, love of country. In other words, men like ourselves. Why are we led to believe otherwise?
As it grew late,afew more songs were traded around the fire, and then all joined in for—I am not lying to you—"Auld Lang Syne." Then we parted with promises to meet again tomorrow, and even some talk ofafootball match.
I was just starting back to the trenches when an older German clutched my arm. "My God," he said, "why cannot we have peace and all go home?"
He looked at me then, searchingly. "Perhaps, my friend. But also we must ask our hearts."
*This story was written by Aaron Shepard
The Christmas Truce of 1914 has been called by Arthur Conan Doyle "one human episode amid all the atrocities." It is certainly one of the most remarkable incidents of World War I and perhaps of all military history. Inspiring both popular songs and theater, it has endured as an almost archetypal image of peace.
Historians, on the other hand, have shown less interest in an unofficial outbreak of peace. There has been only one comprehensive study of the incident: Christmas Truce, by Malcolm Brown and Shirley Seaton, Secker & Warburg, London, 1984—a companion volume to the authors' 1981 BBC documentary, Peace in No Man's Land. The book featuresalarge number of first-hand accounts from letters and diaries. Nearly everything described in my fictional letter is drawn from these accounts—though I have heightened the drama somewhat by selecting, arranging, and compressing.
In my letter, I've tried to counteract two popular misconceptions of the truce. One is that only common soldiers took part in it, while officers opposed it. (Few officers opposed it, and many took part.) The other is that neither side wished to return to fighting. (Most soldiers, especially British, French, and Belgian, remained determined to fight and win.)
Sadly, I also had to omit the Christmas Day games of football—or soccer, as called in the U.S.—often falsely associated with the truce. The truth is that the terrain of No Man's Land ruled out formal games—though certainly some soldiers kicked around balls and makeshift substitutes.
Posted: 26 Dec 2011 09:35 AM PST
kredit gambar dan video kepada malaysiaberih
Posted: 26 Dec 2011 06:42 AM PST
More Malay guys will become gays if more Malay woman keeps on wearing tudong and crazy ass colourful curtain as their clothing. They should dress up more like kpop artis and wear skimppier clothing. Then Malay guy for once can enjoice and feel geli geli for the opposite sex instead of having to choose which colourful gunny sack to choose from. Why do you think all of them crazy for ahmoi?
I think it's time for scholarship's sponsor to screen candidates for gayness during interviews.
Posted: 26 Dec 2011 06:36 AM PST
FE Welcomes QP Wearer, Dato Seri Shahrizat Abdul Jalil, former Minister for Woman, Family and Community Development, Malaysia. Dato Seri Shahrizat is currently Advisor to the Prime Minister on Women & Social Development.
Posted: 26 Dec 2011 06:29 AM PST
Perlembagaan: 'Pandangan paderi tidak salah, Perkasa jangan cabar', kata Aziz Bari
Posted: 26 Dec 2011 05:56 AM PST
Officiating Heritage Photography Exhibition at E & O Hotel. Walking together with Sean Thow - the organising chairman. Sean was my boss 13 years ago when I was still in the dotcom world. Our path crossed again.
Posted: 26 Dec 2011 07:07 AM PST
"Ini tidak harus berlaku di saat seluruh rakyat negeri ini bergembira dengan kepulangan Tuanku Mizan Zainal Abidin untuk kembali memerintah Terengganu, setelah menamatkan tempoh pemerintahan baginda selama sepenggal sebagai Yang di-Pertuan Agong ke 13," katanya.
"Saya tidak fikir Ketua Umno Bahagian Besut tidak nampak bendera Terengganu berkibar di separuh tiang di hadapan pejabatnya di tengah-tengah bandar Jerteh dalam tempoh waktu yang agak lama.
"Saya juga tidak terfikir bekas Menteri Besar Terengganu (Idris Jusoh) itu tidak dimaklumkan tentang kepulangan Tuanku Sultan Mizan yang telah kembali memerintah Terengganu," ujarnya.
Posted: 26 Dec 2011 03:59 AM PST
Here's something that Linda just sent me - really resonates with me :-).
a fat bank account &athin body..
Please do not to mix them up like you did last year.
*posted for laughs :-)
Posted: 26 Dec 2011 04:22 AM PST
Muhyiddin says no one sidelined under BN
So many Malaysians, especially the ordinary Malays who do not belong to the Umnoputra Malays, Bumis, non-Malays-and-Bumis have been sidelined under BN.
Racist Umno-led BN government seeks to divide and rule the nation so that it will continue to stay in power.
Posted: 26 Dec 2011 03:23 AM PST
"Saya tidak ada musuh dengan sesiapapun, tetapi hairan kenapa lelaki tersebut bertindak demikian hingga menyebabkan saya cedera muka selepas tersembam dalam selut di tepi jalan di situ.
"Kejadian tidak jauh dari rumah saya dan secara kebetulannya ada orang ramai melalui kawasan membantu saya menghantar balik ke rumah sebelum keluarga pula menghantar ke Hospital Gua Musang (HGM) untuk mendapat rawatan," katanya.
"Saya langsung tidak sempat melihat lelaki terbabit yang datang dari arah belakang kerana berlaku dalam keadaan gelap dan cepat dia melarikan diri ke simpang empat berkenaan," katanya.
Posted: 26 Dec 2011 01:54 AM PST
ကျနော် လူကက်ဆက် ပန်းချီ ထိန်လင်း
တလောက သန်းဂျီးမတွေ အကြောင်းရေးလိုက်တော့ တချို့လည်း သဘောတွေ့ကြ၊ တချို့ကလည်း ပူပန်ကြ အသံမျိုးစုံ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတခါတော့ တမျိုးပြောင်ပြီး "ပိုး" တွေအကြောင်း ရေးမယ် စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ပိုးက ရိုးရိုးပိုးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ဂီတပိုး၊ အနုပညာပိုးများ အကြောင်းပါ။ သန်းဂျီးမတွေကို ရေနွေးတွေ ကြိုထားတဲ့ ဒယ်အိုးထဲ ထည့်လိုက်တော့ အားလုံးကြွကုန်ပေမယ့် ဒီအနုပညာပိုးက ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်လည်း မသေ၊ လျှပ်စစ်နဲ့တို့လို့လည်း မသေ၊ အင်မတန် ချိုးရ နှိမ်ရ ခက်တတ်ပါတယ်။
၁၉၉၈ နေ ၂၀၀၄ နှစ်ကုန်ပိုင်းထိ အင်စိန်ထောင်၊ မန်းထောင်နဲ့ မြောင်းမြထောင် သုံးထောင်ကို ဂန္ဓာရီလှည့်လည် စံမြန်းစဉ်ကာလ ခြောက်နှစ်ခွဲအတွင်း ထောင် အာဏာပိုင်နဲ့ အရှင်းရဆုံးအမှုဟာ ထောင်တွင်း သီချင်းအော်ဆိုမှု အများဆုံးပါ။ တခါကဆို သီချင်းအသစ်တပုဒ်ကို စိတ်နဲ့ရေးပြီးစ သီချင်းတပုဒ်ကို ထ အသံစမ်း ဆိုကြည့်တော့ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေ နံပတ်တုတ်တွေ တိုက်ထဲကို အလန့်တကြား ပြေးဝင်လာကြပါတယ်။ နောက်တော့ ကျနော် သီချင်းဆိုတာဆိုလည်း သိရော ဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တာ မိုးမွှန်နေသွားတော့တာပါပဲဗျာ။ သူတို့အဆိုအရ ကျနော့်သီချင်း ဆိုသံဟာ ခွေးဟောင်သံထက်ကို ဆိုးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလောက်ထိ ပါရမီ ထူးခြားပါတယ်။ အဲဒီကြားထဲက ကိုထိန်လင်းက စိတ်ကူးလွဲနေတာ ပန်းချီဆွဲရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ သီချင်းဆိုရမှာလို့ တခါတလေ ကာရာအိုကေမှာ တစုံတယောက် ပြောလာရင်တော့ ကျနော်လက်ထဲက မိုက်ကရိုဖုန်းဟာ ဆွဲလုမယူခဲ့ရင် တခြားလူရဖို့ မမြင်တော့ပါဘူး။ အဲလောက်ရူးပါတယ်။ ရူးတဲ့အထဲမှာတော့ ကာလတခုမှာ လူကက်ဆက် ဖြစ်သွားတဲ့အထိပါ။ အဲဒီကာလက စီဒီတွေ မပေါ်သေးတဲ့ ကက်ဆက်ခေတ်ဖြစ်တာမို့ လူကက်ဆက် ဖြစ်သွားရတာပါ။ ခုလို စီဒီခေတ်၊ အိုင်ပေါ့ခေတ်ဆိုရင်တော့ လူစီဒီ၊ လူအိုင်ပေါ့တို့ ဘာတို့ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ လူကတ်ဆက်က ဘယ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြန်တာတုန်းဟု မေးသော် ၁၉၉၁ စက်တင်ဘာ နောက်ပိုင်းကနေ ၁၉၉၂ မိုးလယ်ပိုင်းအတွင်း ကချင်ပြည်နယ် ပါဂျောင်ဒေသ ABSDF (NB) တပ်ဖွဲ့၏ အကျဉ်းသားဘ၀ကဟု တိတိကျကျ ပြောမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလို ပြောရတဲ့အကြောင်းကတော့ တောင်ပိုင်း ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဟာ တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တခုအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်နေပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မဆီမဆိုင် အလကားနေရင်း မတ်တပ်တချို့က ဒီတပ်ဖွဲ့က ရဲဘော်တွေကို ဒီပြဿနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသယောင် ထင်ယောင်ထင်မှား မဖြစ်ရဖို့ တိတိကျကျ ကြိုပြောထားရခြင်း ဖြစ်ပါသဗျ။ ပြဿနာက တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ ဦးဆောင်သူတွေထဲမှာက ကိုမျိုးဝင်း နာမည်တူက ရှိနေတော့ အလကားနေရင်း ကိုမျိုးဝင်း အိပ်ရာအောက် ရေ၀ပ်တဲ့ကိန်း ၀င်နိုင်တာ မြင်ယောင်မိလို့ပါ။
ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီအကြောင်းအရာကို ရေးသားဖို့ လက်တွန့်တဲ့အထဲမှာ အဓိက အချက်တခုကတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာတဲ့ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးသမိုင်း အလံတော်ကို မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ချစ်နေဦးမည်ဆိုတဲ့ စာသားလို ဒုက္ခအပေါင်း ခါးစည်းခံပြီး စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိနေတဲ့အခါ အတော် လက်တွံ့မိတယ်ဆိုတာ ရိုးသားစွာ ၀န်ခံပါတယ်။
ပြည်ပကို ထွက်ခွင့်စပြီးရတော့ ချင်းမိုင်ကို ပန်းချီပြပွဲကိစ္စနဲ့ လာတဲ့အချိန်မှာ လက်ရှိ အေဘီခေါင်းဆောင် (ကို) သံခဲက သမီးလေးနဲ့အတူ ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ လေယာဉ်ကွင်း လာကြိုသဗျ။ ကျနော်တို့ တောစခိုကာစက အိန္ဒိယ လေခွန်းစခန်းမှာ ကျနော့်အနွံအတာ အများကြီး သည်းခံနားလည်မှုပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်လို့ပါ။ ပန်းချီပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအပြီး နောက်တရက်မှာတော့ သံခဲက မင်းကို ဒီနေ့ စပါယ်ရှယ်ဒင်နာ ကျွေးမယ်ဆိုပြီး လာခေါ်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း လက်ရှိ အေဘီဥက္ကဋ္ဌတဦးက တည်ခင်းမယ့် ညစာဆိုတော့ တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားပြီး သူ့ဆိုင်ကယ်လေးနောက်ကနေ လိုက်သွားပါတယ်။ လမ်းမှာ စမူဆာတို့၊ နံပြားတို့၊ ဒန်ပေါက်တို့ရတဲ့ ကုလားဆိုင် တဆိုင်ကို ၀င်ပြီး ပဲဟင်းနဲ့ ကြက်သားဟင်း ၂ ထုပ် ၀င်ဝယ်သဗျ။ ပြီးတဲ့အခါကျတော့ သူတို့မိသားစု ငှားထားတဲ့ အခန်းလေးကို သွားကြပါတယ်။
သူတို့မိသားစု သုံးယောက်နေတဲ့ အခန်းလေးထဲရောက်တော့ မဒမ်သံခဲက ကျနော့် အတွက် အထူးစီမံထားတဲ့ ဟင်းတခွက်နဲ့ စောင့်နေပါတယ်။ တခြားဟုတ်ပါရိုးလားဗျာ။ ကျနော်တို့ အိန္ဒိယမှာ နေခဲ့စဉ်က ရွှေလှံဗိုလ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ကုလားအော်ငြုပ်သီးကို ငပိနဲ့ ထောင်းထားသဗျ။ ပြောစရာတခုရှိတာကတော့ မဒမ်သံခဲ (ကျနော်တို့အခေါ် ဒေါ်လှိုင် ခေါ် မခင်ဆွေလှိုင်) ဟာ ကျနော်တို့ မြောက်ပိုင်းပြဿနာတွေ ဖြစ်နေချိန်မှာ ပါဂျောင်မှာ တထိတ်ထိတ် တလန့်လန့်နဲ့ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အနိဋ္ဌာရုံအားလုံးကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မျက်မြင်တဦးလည်း ဖြစ်ပါသဗျ။ ဒီလိုနဲ့ သုံးဦးသား ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောရင်း မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျရပါတယ်။ (ရွှေလှံဗိုလ်ငြုပ်သီး ကြောင့်ပါ ဒီငြုပ်သီးက စားတဲ့သူတိုင်း မျက်ရည်ကျအောင် စပ်ပါတယ်။)
ထမင်းစားပြီးတော့ စကားပြောကြရင်း ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့တွေ ထောက်လှမ်းရေး အဖြစ် စွပ်စွဲခံခဲ့ရပြီး ကျဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိတောင်ပိုင်း ABSDF (NB) က တော်လှန်ရေးသမား ကျောင်းသားရဲဘော်တွေသာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပေးဖို့ သင့်၊ မသင့်ကိစ္စ စကားပြောမိကြပါတယ်။ ဒီတော့ သူက ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ ဒီလိုပြောပါတယ်။ သူငယ်ချင်း မင်းစဉ်းစားကြည့် ဒီကိစ္စဖြစ်နေချိန် ငါက အနောက်ပိုင်း (အိန္ဒိယ) ဘက်မှာပဲ ရှိသေးတာ၊ မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ခဲ့တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စမှာ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါရက်နဲ့ ဘာသဘောထား မှ မပေးဘဲ ရေငုံနေကြတာကို ငါက သဘောထားထုတ်ပေးဖို့ ဘာမှမလိုဘူးထင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူပြောတာ အမှန်ပါပဲ။ အမှန်ကတော့ ကျနော်တို့ မသေဘဲ ကျန်နေသူတွေ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့တွေရဲ့ အားနည်းချက်။ ကျနော်တို့တွေရဲ့ တာဝန်ပျက်ကွက်မှုသက်သက် ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဆက်ပြောတာက ငါတို့က အခုလက်ရှိ ရှိနေတဲ့ အခြေအနေကို ထိမ်းထားနိုင်ဖို့ကို မနည်းရုန်းကန်နေရတာ။ အပြင်ရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်မြန်မာတွေ ကူညီနေလို့ ဒီလောက်ထိ ရပ်တည်နေနိုင်တာ။ ဒါလည်း အမှန်ပါ။ လောလောဆယ် ကျနော်တို့ သုံးယောက် ထမင်းစားနေရတာကိုက သူတို့မိသားစု အိပ်ခန်းထဲမှာ စားနေရတာပါ။ အိပ်ခန်းနဲ့ မီးဖိုချောင်နဲ့ ထမင်းစားခန်းကို ပေါင်းထားတဲ့ သရီးအင်န်ဝမ်း အခန်းလေးကို ကြည့်ပြီး လက်ရှိ အေဘီ အတွက် စခန်းပြင်ထွက်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးတောင် ခုလို ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ချို့ချို့တဲ့တဲ့ နေရရင် အထဲမှာ ရုန်းနေရတဲ့ ရဲဘော်တွေခမျာ ဘယ်လောက် ခက်ခဲကြမလဲဆိုတာကို ခန့်မှန်းမိပြီး စာနာမိပါတယ်။ ဒီလို အကျပ်တည်းကြား ခရီးဆက်နေတဲ့ သူတို့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း လေးစားမိသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုရေးသားမယ့် လူကတ်ဆက် အဖြစ်အပျက်များမှာ လက်ရှိ ABSDF တပ်ဖွဲ့မှာ တာဝန်မရှိပါကြောင်း ကြိုတင် ပြောထားရပါတယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ခုလို ကြိုတင် ရှင်းလင်းထားရတာကလည်း သတင်းတွေထဲမှာ အမြဲပါပါလာတတ်တဲ့ ရဲဘော်သံခဲ ဆိုတဲ့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို နည်းနည်းလန့်တာလည်း ပါပါတယ်။ မလန့်လို့လည်း မရဘူးဗျ။ ကျနော်ရဲ့ ငယ်ကျိုးငယ်နာအားလုံးကို ဒီငသိက သိထားတာ၊ မတော် အိန္ဒိယစခန်းမှာ နေခဲ့တုန်းက ကျနော်ကြောင်ခဲ့တဲ့ ကသည်းမတွေထဲက တယောက်ယောက် နာမည်ကို မှားရိုက်သလိုနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ကျနော့်မိန်းမမေးလ်ထဲ ရိုက်ထည့်လိုက်တာမျိုးပေါ့ဗျာ။ ဆောရီး တလုံးထဲနဲ့တင် ကျနော် စပွန်ဆာ ပျောက် သွားနိုင်တဲ့ အကွက်လေးတွေက ရှိနေတော့ ကြိုခင်းရကျင်းရ တင်ရမြောက်ရတာလေး တွေတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ လူပြက်တွေ ပြက်လုံးပြက်တာတောင်မှ မပြက်ခင်မှာ ရပ်ရွာအခြေအနေ ကြည့်ပြီး ပဏာမအမှုနဲ့ ဂါရ၀ပြုပါသည် ဆိုတာလေးတွေက လုပ်ရသေးတာကိုး။ နို့မဟုတ်ရင် ပွဲခင်းထဲ ဖားခုန်ဝင်လာတာကနေ ကျားခုန်ဝင်လာတယ်ဖြစ်လို့ ပြေးပေါက်တွေ မှားခဲ့ရဖူးတဲ့ ကိုယ်တွေ့တွေက ရှိခဲ့တာကိုး။
နောက်ပြဿနာတခုကတော့ ကိုထွန်းအောင်ကျော် နာမည်တူပြဿနာပါ။ ခက်တာက ၂ ယောက်စလုံးက အေဘီဥက္ကဋ္ဌတွေချည်း ဖြစ်နေတာပါ။ ခုလောလောဆယ် အမေရိကားမှာ ရှိနေတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က တောင်ပိုင်းက ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ရှေ့က ၁၉၇၄ မျိုးဆက်က ဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ထက်အရင် ထောင်ပုံစံထမင်းကို စားခဲ့သူပါ။
ဒီလောက် နိဒါန်းပျိုးပြီးပြီဆိုရင်ဖြင့် ကျနော့် လူကက်ဆက်ဖက်ကို လှည့်လို့ရပြီ ထင်တယ်ဗျာ။ ပြောမယ့်သာ ပြောရတာ အွန်လိုင်းမှာ စာရေးရတာလည်း မလွယ်ဘူးဗျ။ ပြောသလို အင်မတန် ၀ဋ်ကြွေးမကင်းတဲ့ လူတွေ လုပ်တဲ့ အလုပ်ဗျ။ ရေးတဲ့စာမူက စာရိုက်လို့ မပြီးသေးခင် ကွန်မင့်က အောက်က အရင်တက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးကိုး။
ကျနော်တို့ ပါဂျောင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သန်းဂျီးမ အတွေ့အကြုံကို ဖတ်ပြီးကြတဲ့နောက်မှာ အမျိုးမျိုး တုန့်ပြန်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျနော်ကိုလည်း ဒီပြဿနာကို ဘယ်သူတွေ ကျူးလွန်တယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်ပုံ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ဘယ်သူတွေ အသက်မသေဘဲ ကျန်နေတယ် … စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ပြောရရင် ကျနော်နဲ့အတူ ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ရဲဘော် ၅၀ လုံး ပြည်တွင်းမှာ အသက်ရှိထင်ရှား ရှိနေကြသလို တိကျတဲ့ စာရင်းဇယားနဲ့ ထုတ်ဖို့လည်း လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကြားရပါတယ်။
နောက် တကယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကတဆင့် အချက်အလက် တွေကို ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ် တက်လာတာလည်း တွေ့နေရတာမို့ အချက်အလက်တွေ သိချင်ရင်တော့ အဲဒီစာမျက်နှာတွေကိုပဲ ညွန်းဆိုရပါတယ်။ ကျနော်အဓိက ရေးချင်တာက အဲဒီကာလဆိုးကြီးမှာ ကျနော်တို့ ဘယ်လို ခံစားရသလဲ၊ ဘယ်လို အသက်ရှင်အောင် မွေးခဲ့ကြသလဲ၊ ဘယ်လို အမှားတွေ ရှိခဲ့သလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကိုပါ။
ဒီလိုဗျ ဒီပြဿနာတွေ မဖြစ်ခင်က ABSDF(NB) အဖွဲ့ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌက ကိုထွန်းအောင်ကျော် ပါ။ ဥက္ကဋ္ဌအပါအ၀င် ဗဟိုကော်မတီဝင် အားလုံးလိုလိုကို ထောက်လှမ်းရေးတွေဆိုပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အဖွဲ့မှာ ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ခဲ့သူက ကိုအောင်နိုင်။ အတွင်းရေးမှူးက ကိုမျိုးဝင်းပါ။ စစ်ရေးတာဝန်ခံက ကိုသံချောင်းပါ။ ကျနော်တို့ကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် စစ်ဆေးတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့ ကျောင်းသားတပ် ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ပြီး ကိုမျိုးဝင်းက ဦးစီးသဗျ။
အဲဒီကာလမှာတော့ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဟာ ထင်တိုင်းကြဲခွင့် ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း အချိန်မရွေး ထောင်ကနေ ခေါ်ထုတ်ပြီး အချက်အလက် လိုချင်သည်ဖြစ်စေ မလိုချင်သည်ဖြစ်စေ ခေါ်ယူပြီး ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ ညှဉ်းပန်းနည်းမျိုးစုံကိုလည်း တီထွင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီလို ပြောရတာကတော့ တကြိမ်မှာ ကျနော်ကို ခေါ်ပြီး ပါးစပ်ထဲကို ၀ါယာကြိုး ၂ ပင် ပူးထည့်ပါတယ်။ ပြီး ပါးစပ်ကို တိတ်နဲ့ ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀ါယာစကို လက်နဲ့ လှည့်ခေါ်ရတဲ့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ် ထွက်လာတဲ့အထိ လှည့်ပြီး ညှဉ်းဆဲပါတော့တယ်။ အမှန်တော့ စမ်းသပ်တာပါ။ အဲဒီက ထွက်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြောင့် ကျနော့် ခေါင်းတ၀ိုက်မှာ လျှပ်စစ်စီးနေတာကို မျက်လုံးမှိတ် အော်နေတဲ့ အာရုံမှာ မြင်နေရတဲ့အထိပါပဲ။ စစ်နေတဲ့ ချာတိတ်တွေက ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး တခွီးခွီး သဘောကျ ရယ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကျနော့် မျက်နှာဟာ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကြောင့် တွန့်လိမ်ရှုံ့တွ နေတဲ့ကြားက ကြွက်သားတွေ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်သွားပုံဟာ တော်တာ် ရီစရာကောင်း နေပုံရပါတယ်။ အဲဒါကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ပြီး တခွိခွိ ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်တော့ သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ကို ဥက္ကဋ္ဌကို ခေါ်ပြလိုက်ပါသေးတယ်။ ကြည့်ကြည့် နည်းနည်းလေး လှည့်ရင် နည်းနည်းလေး ရွဲ့တယ်၊ များများလှည့်ရင် များများရွဲ့တယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီချိန်က ကျနော့်ကို နှိပ်စက်နေတဲ့ထဲက ဖိုးနှောင်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးဆိုတာကလည်း ၁၈ နှစ်လောက် ရှိပါဦးမယ်ဗျာ။ တခါကျတော့လည်း ကျနော့်ကို ထင်တိုင်း လှိမ့်ရိုက်နေရာက သူတို့ တချက်ရိုက်ရင် ကျနော်က ဒူဝေေ၀လို့ အော်ပေးရမယ်လို့ ပြောလာပြန်သဗျ။ အဲဒီတော့ ကျနော့်လိုကောင် မှာလည်း ပေါကြောင်ကြောင်နဲ့ ဒူဝေေ၀ ရတာပေါ့ဗျာ။ နောက်တော့ နာလွန်းမက နာတော့လည်း ဒူဝေေ၀တင်မက ဒူဝေးဝေးဝေးဝေးထိ ကွန့်ရတဲ့ထိပေါ့ဗျာ။
အဲလို ထောက်လှမ်းရေး နှိပ်စက်ချိန်ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့ ကျနော်တို့တွေဟာ အကျဉ်းထောင်တာဝန်ကျတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ လက်ထဲမှာပဲ နေရသဗျ။ အဲဒီ ထောင်ကုန်းတာဝန်ခံဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကလည်း သူတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့က အယုံကြည်ရဆုံးထဲမှာမှ လက်ရဲဇက်ရဲ နာမည်ရသူတွေကို တပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ပေးထားတာမို့ ထောင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ဒုတိယ တန်ခိုးထွားဆုံးပေါ့ဗျာ။
အဲဒီလုံခြုံရေးလက်မှာ ကျနော်တို့အသက်ကို ၀ကွက်အပ်ထားရတာမို့ သူတို့ပြုသလို နုရပါတယ်။ သူတို့ကလည်း သူတို့ ခန့်ထားတဲ့ တာဝန်နဲ့ လျော်ညီစွာ လက်စွမ်းလက်စ အပြိုင်ပြရပါတယ်။ တညမှာတော့ ကျနော်တို့ကို မျက်နှာတွေ စည်းထားပြီး အိပ်ရာထဲ လှဲခါနီးမှာ လူကက်ဆက် အထူးဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မင်းတို့အထဲက ဘယ်သူ သီချင်းကောင်းကောင်း ဆိုတတ်သလဲကွတဲ့။ အားလုံး တိတ်ပြီး နေပါတယ်။ ဘာများ လုပ်ဦးမလို့လဲပေါ့လေ။ လုပ်ပါကွတို့က ဒီကုန်းပေါ်မှာ နေ့နေ့ညည စောင့်နေရတာ။ ပျင်းစရာကြီး အပျင်းပြေ သီချင်းဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေး လုပ်ရအောင် ဆိုတော့ တယောက်က ကိုဘောကြီး ဆိုတတ်တယ်ဆိုပြီး ကျနော့်ဆီကို ကျနော်တို့ထဲက တယောက်က ချွန်တွန်းလုပ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော် အဖမ်းမခံရခင်မှာ အူကျသလို ဖြစ်လို့ ခွဲစိတ်မှုတခု လုပ်ခဲ့တာကို စွဲပြီး ကျနော့်ကို ဖမ်းတဲ့အခါမှ မင်းလို ထောက်လှမ်းရေးက မတန်မရာ ဗိုလ်ချုပ်ငယ်နာမည် မှည့်ရကောငးလား ဆိုပြီး နောက်နာမည်တခုရှိလား မေးပါတယ်။ အဲဒီမှာ တယောက်က တလောလေးက ဒီကောင် ဘောခွဲထားတာ ဘောကြီးလို့ ခေါ်ရအောင်ဆိုပြီး နံနှိမ်လိုက်ပြီး တဲ့နောက် ကျနော့်နာမည်ဟာ ဘောကြီး ဖြစ်လာပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ကျနော်က တတ်သည့်ပညာ မနေသာဆိုသလို ဓနုဖြူစိုးသိန်းရဲ့ လူပျိုကြီးသီချင်းကို ခပ်နောက်နောက်လေး ဆိုပြလိုက်ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကျနော်ဟာ ထန်းပင်တက်လက်မှတ်ရတဲ့ လူတယောက်ဖြစ်သွားပြီး မကြာခဏဆိုသလို ဒီသီချင်းကို ဆိုပြရတဲ့ဘ၀ ရောက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်တော့ စောစောက သီချင်းဆိုခိုင်းတဲ့ လူက ကျနော့်မျက်နှာနား လာရပ်ပြီး ပါးစပ်ဟလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျနော် ပါးစပ်ဟ လိုက်တော့ သူသောက်နေတဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်ကို လာတပ်ပေးပြီး သောက်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာ ကျနော်ဟာ နေရင်းထိုင်ရင်း လူ ၇၀ ကျော်လောက်ထဲမှာ ဆေးပေါ့လိပ် ပထမဆုံး စသောက်ခွင့်ရတဲ့ ကံထူးသူ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ သောက်တယ် ဆိုတာကလည်း သူ့စေတနာ ရှိသလောက် သုံးလေးဖွာပေါ့ဗျာ။ လက်ပြန်ကြိုး ချည်ထားတဲ့အပြင် မျက်လုံးကလည်း စီးထားသေးတာကိုး။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တယောက် ဆေးလိပ်ကလေး သောက်ခွင့်ရပြီး ထောင်စောင့်နဲ့ ကောင်တွေ ရဲ့ မျက်နှာသာရတာလေး ကြားတဲ့အခါ နောက်ဘယ်သူ သီချင်းဆိုချင်သေးလဲ ဆိုတဲ့အခါ နောက်ထပ် ဖိုးဆိုချင်လေးတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ တယောက်က ဆိုနေချိန်မှာ ကျန်တဲ့ လူတွေက လှဲနေကြရပါတယ်။ သီချင်းဆိုတဲ့သူကပဲ ထထိုင်ပြီး မျက်နှာစည်းထားရက်က ဆိုပြရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီညလေးဟာ ကျနော်တို့ဘ၀မှာတော့ လက်ရှိခံနေရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ဒုက္ခတွေထဲကနေ အပြန်အလှန် ဆိုပြကြတဲ့ သီချင်းလေးတွေထဲ စီဆင်းမျောပါ သက်သာခွင့်လေး တခဏရခဲ့တဲ့ ညလေးတည အစဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရာသီဥတုတွေ ပြောင်းလဲသလိုပဲ ကျနော်တို့ လုံခြုံရေးတဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားကလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာမို့ တညမှာတော့ လုံခြုံရေးတာဝန်ခံတဲ့ အဖွဲ့ရော ထောက်လှမ်းရေး တာဝန်ခံတဲ့ အဖွဲ့တွေရော တပ်ဖွဲ့ကို ခေါင်းဆောင်တဲ့ လူတွေပါ ထောင်ကုန်းအောက် တနေရာရာမှာ သောက်ကြပြီး တော်တော်ရေချိန် မှန်လာတော့မှ တက်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုညမျိုးတွေဟာ ကျနော်တို့တွေအတွက်တော့ မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ စကားကို ငှားပြော ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီည ကံမကောင်းပါလားလို့ ပြောရမယ့်ညပါ။ ထုံးစံအတိုင်း တရားခံ တွေ ထ ဆိုတော့ ထထိုင်နေရပြီး မျက်နှာတွေ စည်းထားတဲ့ ကျနော်တို့ရှေ့က အလာ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ လမ်းတွေ လျှောက်နေကြသံ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းသံတွေပဲ ကြားနေရပြီး သူတို့ကိုတော့ ဘယ်မြင်ရမလဲဗျာ။ တယောက်က ဟာ ဒီကောင်တွေ သီချင်းဆိုကောင်းတယ်ဗျ ဆိုပြီး စလာပါတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ထောင်မှူးလုပ်တဲ့ ကောင်က အားလုံးနားထောင် ခုချိန်ကစပြီး မင်းတို့က လူကက်ဆက်တွေ လုပ်ရမယ်။ မင်းတို့ကို ဘယ်ဘက်ပါးကို ရိုက်လိုက်ရင် အဲဒါ ကက်ဆက်ဖွင့်တာပဲ။ မင်းတို့ရတဲ့ သီချင်းကို ဆိုရမယ်။ ညာဘက်ပါးကို ရိုက်လိုက်ရင် stop ပဲ နားလည်လားလို့ အော်လိုက်တော့ အားလုံးကလည်း နားလည်ပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီလို ပြန်ဖြေပြီး သူတို့ကြားမှာ ဘယ်ကက်ဆက်ကို စဖွင့်ရင် ကောင်းမလဲဆိုတာ နည်းနည်းကြိတ်ပြောသံ တိုးတိုးကြားနေရပြီး ဘောကြီး၊ ဘောကြီး ဆိုတာလည်း ကြားရသဗျ။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဖြန်းကနဲ ကျနော့်ဘယ်ဘက်ပါး ပူကနဲ ဖြစ်သွားတာမို့ ကောက်ကာငင်ကာနဲ့ လူပျိုကြီးသီချင်းရဲ့ အင်ထရိုတီးလုံးလေး ပြာပြာ သလဲကောက် ပါးစပ်နဲ့ဆိုရင်း လူကက်ဆက်ဘ၀ အရှင်လတ်လတ် ကျရောက်သွား ပါတော့တယ်။
ပြောရရင်တော့ အဲဒီညက ကျနော်ကနေ အစပြုပြီး သီချင်းဆိုတတ်တဲ့ အကျဉ်းသား ရဲဘော် အတော်များများဟာ လူစင်စစ်ကနေ လူကက်ဆက်ဘ၀ ရောက်သွားခဲ့ရသဗျ။ ပါးရိုက်တဲ့ လက်ဆတွေကတော့ အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ။ တချို့ကျတော့လည်း ဆိုနေရင်းက ညာဘက်ပါးကို ပြင်းပြင်းရိုက်ပြီး ပိတ်လိုက်တော့ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ဘာဆက်လုပ်ရ မယ်မသိ ဖြစ်နေချိန်မှာ ပြန်အိပ်တော့လေဆိုပြီး ရင်ဝကို ဖိနပ်နဲ့ ဆောင်ကန်လိုက်တာ ခံရပြီးမှ လန်ကျသွားတဲ့သူတွေလည်း ရှိပေါ့ဗျာ။
တကယ်စေ့စေ့တွေးကြည့်တော့ ဒါဟာ အကြီးအကျယ် စော်ကားတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်က ဘယ်လောက်ထိ ရူးသလဲဆိုတော့ အဲဒီအစီအစဉ်ကို စပြောပြ နေတုန်းက တော်တော်ဆန်းပြားတဲ့ စိတ်ကူးလေးပဲ တော်တော် စိက်ကူးကောင်းတဲ့ လူလို့ စိတ်ထဲက တွေးမိနေသေးဗျာ။ ပါးရိုက်ချလိုက်တော့မှ ဘုရားတမိတာဗျ။ အဲဒီနောက် ပိုင်းက စလို့ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ ဒီလူကက်ဆက်တွေအဖြစ် အစောင့်တွေနဲ့ ထောင်ကုန်း ပေါ်တက်လာတဲ့ ဗီအိုင်ပီတွေကို ဖျော်ဖြေရတာဟာ အစဉ်အလာတခု ယဉ်ကျေးမှုတခု ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ကျနော်အတွက်တော့ စောစောကလို လူက ၀မ်းတွင်းရူး ဖြစ်နေကြောင့်လည်းဖြစ်လို ဒီ သီချင်းသီဆိုတဲ့ အစီစဉ်မှာ ပါဝင်ရတဲ့ လုံလောက်တဲ့ နောက်အကြောင်းတခု ရှိပါတယ်။ သီချင်းဆိုခိုင်းတဲ့ လူက ကျနော်တို့ကို နှိပ်ကွပ်နေတဲ့ ထောင်အာဏာပိုင်တို့ ထောက်လှမ်း ရေး တို့ ဖြစ်ပေမယ့် နားထောင်နေတဲ့လူ အများစုကတော့ ထောက်လှမ်းရေးရဲ့ နှိပ်စက်မှုဒဏ်နဲ့ သေလုမြောပါး ဖြစ်နေရသူတွေ ဘယ်နေ့ထုတ်ပြီး သတ်မလဲဆိုတာ တထိတ်ထိတ် ဖြစ်နေရတဲ့ ဘ၀တူ တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ တကယ်လည်း နေ့မြင် ညပျောက် သွားတာတွေကလည်း မနည်းမနောကိုးဗျ။ ဒါကြောင့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ရှင်ခွင့် ရတဲ့အချိန်လေးတခုမှာ စိတ်လေးခဏ အနုပညာကြောင့် သက်သာရာရလည်း မနည်းဘူးဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပါးရိုက်ရိုက် မရိုက်ရိုက် သီချင်းဆိုကြ ချိန်တွေတိုင်း အရိုက်ခံပြီး ၀င်ဆိုခဲ့တဲ့အပြင် နောက်ပိုင်းမှာ တကိုယ်တော် အငြိမ့်ပြက်လုံး အစီအစဉ်လေးတွေပါ ဆောင်းပြီး တင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာ ၀င်ပြီး ရီစရာ ပြက်လုံးထုတ်ရတာ တော်တော် အန္တရာယ်များသလို စိန်ခေါ်ချက်လည်း များပါတယ်။ နားထောင်နေတဲ့ လူတွေက ကိုယ့်ကိုမှ မမြင်နိုင်တာကိုး၊ ထိုင်နေရင်းကနေ လုပ်ရတာဖြစ်သလို ကိုယ့်မျက်နှာကိုလည်း ပိတ်စကြီးနဲ့ စည်းထားတာဆိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ ရေဒီယိုက လာတဲ့ ရေနံချောင်း ဖေကံကောင်းဆိုတဲ့ ဦးဓာတ်ဆီ၊ ဦးဓာတ်ဆံတို့ ပြက်လုံးကို အစအဆုံး ရနေတာမို့ အဲဒီပြက်လုံးကို အခြေအနေကြည့်ပြီး တိုက်ရိုက်ပြက်တဲ့အခါ ပြက်၊ နည်းနည်း လစ်ရင်လစ်သလို ကိုယ်ထည့်ပြောချင်တာလေးတွေကိုလည်း ထည့်နဲ့ ထောင်တွင်း ပျော်တော်ဆက်တယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သီချင်းဆိုဖို့ တောင်းဆိုခံရတဲ့သူအတွက် တခုကောင်းတာက သူများတွေ မြေပေါ် မသက်မသာ လှဲအိပ်နေရချိန်မှာ သူက ထိုင်နေခွင့်ရတာ နာထောင်နေတဲ့ အစောင့်က စေတနာရှိရင် ဆေးလိပ်လေး တဖွာ နှစ်ဖွာ သောက်ခွင့်ရတာတို့ဖြစ်ပြီး အင်မတန် အန္တရာယ်များတာကတော့ မူးပြီးတက်လာတဲ့ လူတွေရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်ဖြစ်သွား တတ်ထာ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ သီချင်းမှားလို့ နားထောင်နေတဲ့ကောင်က နားကြားပြင်းကတ်ပြီး ဆောင့်ကန်တာတို့ ခံရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ထူးအ်ိမ်သင်ရဲ့ ညီလေးရေဆိုတဲ့ သီချင်းမျိုးပေါ့ဗျာ။ အောင်မာ ထောက်လှမ်းရေးက ရာစစ မှန်ရာလုပ် ဟုတ်တာပြောဖို့ မမေ့နဲ့ လုပ် နေသေးတယ်၊ ငါတို့ကို ရိနေတာပေါ့ ဟုတ်လား ဆိုတဲ့နောက်မှာ နှစ်ရက်၊ သုံးရက်လောက် အစာတောင် မြိုမရတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ကျရောက်သွားနိုင်လို့ပါ။
မှတ်မှတ်ရရကတော့ အမရပူရဘက်လာတဲ့ အေဘီယူဂျီလောကမှာ မုန်တိုင်း ၃ လို့ သိထားကြတဲ့ စံလွင်လေး (ခေါ်) စံစံက ခေတ်ဟောင်းတေးတွေ တော်တော်ရသလို အသံကလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ သူ မကြာခဏ ဆိုလေ့ရှိတဲ့ သီချင်းကတော့ ဆရာမြို့မငြိ်မ်း ရေးတဲ့ ရေချိုးဆိပ်နဲ့ နပန်းဆံ သီချင်းပါ။ ဒါကြောင့် မကြာခဏ သူ့ပါးကလည်း လက်ဝါးတောင်းတတ်ပါတယ်။ ဖြန်းကနဲ ပြီးတာနဲ့ လုပ်ပါဦးကွ အိပွဲ့ အိပွဲ့ ပြောလိုက်ရင် သူက စဆိုပါတော့တယ်။ အိပွဲ့ အိပွဲ့ ငှက်သမ္မာန် ခတ်သွားတယ် …။
ကိုစံလွင်လေးကို စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာ ဓားမြောင်ကို မီးဖုတ်ပြီး ခြေသလုံးထဲ ထိုးထည့်တဲ့ ဒဏ်ရာကို တော်တော်ကြာကြာ ခံစားရရှာပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စခန်းက ထွက်ပြေးကြတဲ့ထဲမှာ ကျနော်တို့နဲ့အတူ ပါလာပြီး ၁၉၉၈ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေး ပြန်လည်လှုပ်ရှားတဲ့ စွဲချက်တွေနဲ့ စစ်အစိုးရက ထောင်ပြန်ချတော့လည်း ကျနော်တို့နဲ့အတူ ပျော်ပျာ်ကြီး ပါလာပါတယ်။ ၅ ညနဲ့ ၇ နှစ်ပါ။ မန်းလေးထောင်ထဲမှာ ကျနော်တို့နဲ့ ဆက်ပြီး အိပွဲ့ အိပွဲ့ သီချင်း ဆက်ဆိုကြပါတယ်။ ခုတော့ ထောင်က ပြန်လွတ်လာပြီး အထဲမှာ စဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခုခံအားနည်းရောဂါကြောင့် တောင်မြို့မှာ ကွယ်လွန်ပြီလို့ ကြားရပါတယ်။
နောက် အဆိုကောင်းတယောက်ကတော့ စမ်းချောင်း အခြေခံပညာသမဂ္ဂ ကျောင်းသားလေးဘ၀က တောခိုလာတဲ့ ဘိုဘို (ခေါ်) မိုးကျော်သူပါ။ ငယ်ငယ်လေးနဲ့ တောခိုလာလို့ လူတကာ ချစ်ကြတဲ့ ဘိုဘို တယောက်ဟာလည်း အသက်မသေရေး အတွက် ကျနော် NIP က ပါလို့ ထွက်ဆိုချက်ပေးပြီး အကျဉ်းသားဖြစ်လာရရှာပါတယ်။ ဘိုဘို ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့က တီးဝိုင်းမှာ ပင်တိုင်အဆိုတော်ဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားတွေမှာ တော်လှန်ရေးသီချင်းတွေ အမြဲဆိုရတာမို့ ကျောင်သားတပ်ထဲက ကေအိုင်အေဘက်က မိသားစုတွေက အစ ချစ်ကြခင်ကြသူပါ။ သူတပါးကို အမြဲကူညီတတ်ပါတယ်။ သူက အမြဲတမ်း "သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ်" သီချင်းကို ဆိုတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တညမှာတော့ အစောင့်တာဝန်ကျတဲ့သူက ဘိုဘိုရဲ့ သဘာဝရဲ့ရင်သွေးငယ် အပြီးမှာ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ သီချင်းတပုဒ်ကို ဆိုဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဘိုဘိုက ဒီသီချင်းတော့ မဆိုပါရစေနဲ့ အကိုရယ်ဆိုပြီး တောင်းပန်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချီအချ ဖြစ်နေကတည်းက ဘိုဘို့ ဘေးမှာ ကပ်ပြီး လှဲအိပ်နေတဲ့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ပြဿနာတော့ စပြီဆိုတာ သိနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘိုဘိုဟာ မငြင်းသာတော့ဘဲ "ပျံသာပျံပါ ခွပ်ဒေါင်းနီ" ဆိုတဲ့ သီချင်းကို လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်နဲ့ စဆိုပါတော့တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ထွက်လာတဲ့ ဘိုဘိုရဲ့ သီချင်းသံကြောင့် ဒဏ်ရာကိုယ်စီနဲ့ မြေပေါ်မှာ မျက်နှာကို စည်းပြီး လှဲအိပ်နေကြရတဲ့ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ စူးနစ်တဲ့ ဝေဒနာနဲ့အတူ သီချင်းစာသားတွေနောက်မှာ မျောပါနေပါတော့တယ်။
"… ပျံသာပျံပါ ခွပ်ဒေါင်းနီ မုန်တိုင်း မိုးသက်ချီ …" တဲ့။
ကျနော်တို့ဟာ ခွပ်ဒေါင်းနီသီချင်းမှာ သိပ်ကြာကြာ မနစ်မျောလိုက်ပါဘူး၊ "ဖုန်း .. ခွပ် .. အင့်" ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ဘိုဘိုရဲ့ တကိုယ်လုံး ကျနော့်အပေါ် ပုံကျလာပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူ သီချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာ အင်မတန် လက်ယဉ် သွေးဆာတတ်တဲ့ လက်သီးဆိုတဲ့ နောက်တန်း လုံခြုံရေးတာဝန်ကျ တယောက်ဟာ အရက်မူးဝင်လာပြီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဘိုဘို့မျက်နှာကို စစ်ဘိနပ်နဲ့ ဆောင့်ကန်ချလိုက်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ပြန်ထခိုင်းပါတယ်။ ထောက်လှမ်းရေးက လူပါးဝလို့ ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးသီချင်း ဆိုရကောင်းလားဆိုပြီး ပါလာတဲ့ M22 မောင်းပြန်သေနတ်ဒင်နဲ့ ခေါင်းကို ရိုက်ချလိုက်တဲ့ အခေါက်မှာတော့ ဘိုဘို့ခေါင်းက သွေးတွေ ကျနော် မျက်နှာပေါ်ကို ပေါက်ပေါက် ပေါက်ပေါက် ကျလာပါတယ်။ အဲဒီမှာ မရပ်သေးဘဲ ပြန်ထခိုင်းလိုက် ရိုက်ချလိုက်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ထင်တိုင်းကြဲနေပါတော့တယ်။
ခံရတဲ့သူမှာတော့ မသိပါဘူး၊ ကျနော့်စောင်နဲ့ အင်္ကျီတွေကတော့ သွေးနဲ့ ရွှဲနစ်နေပေမယ့် ကျနော်လည်း မလှုပ်ရဲပါဘူး။ ဘယ်သူ့ဆီကမှလည်း ဘာအသံမှ ထွက်မလာပါဘူး။ အမှန်တရားကို ချစ်လွန်းလို့ ကျနော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်နားထဲမှာ အတိုင်းသား ကြားနေရတဲ့ ဒီမတရားမှုကြီးအတွက် တားမြစ်ကန့်ကွက်ဖို့ နေနေသာသာ နားရွက်တောင် မခတ်ရဲဘဲ ငြိမ်စင်းနေရတဲ့အဖြစ်ကို စေ့စေ့ပြန်တွေးကြည့်တိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ စက်ဆုပ်အော့နှလုံးနာရပါတယ်။
တကြိမ်မှာတော့ မူးနေတဲ့ လက်သီးဟာ ဘိုဘို့ကို ပြန်ထခိုင်းပြီး မျက်နှာကို သေနတ်ပြောင်းနဲ့ ဆောင့်ထိုးချလိုက်ပါတယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ သေနတ်ပြောင်းဟာ ဘိုဘို့ကို ချော်ပြီး အိပ်နေတဲ့ ကျနော့်နံကြားထဲကို အရှိန်နဲ့ တိုးဝင်ဆောင့်ပါတော့တယ်။ နံရိုးတော့ ကျိုးပြီလို့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး အားရအောင် နှိပ်စက်နေတဲ့ တချိန်လုံး ဘယ်သူ တဦးတယောက်ကမှ တားမြစ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ တနာရီလောက်ကြာတော့ သူနာပြုအဖွဲ့ ရောက်လာပြီး ခေါင်းက ကွဲနေတာတွေကို အစိမ်းချုပ်ချုပ်နေကြတာ အားလုံးနားမှာ ကြားနေခဲ့ရပါတယ်။
ဒီဘိုဘို (ခေါ်) မိုးကျော်သူဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ကျနော်နဲ့အတူ စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့အထဲမှာ အမှုတွဲဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့က ၅ ည နဲ့ ၇ နှစ်သာ ကျပေမယ့် မိုးကျော်သူကို ၁၂၂ ပုဒ်မနဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ် ချလိုက်ပါတယ်။ မန်းထောင်ရဲ့ ညချမ်းဂီတ ဆည်းဆာတွေဆိုရင် အမြဲပွဲတောင်းခံရပြီး မကြခဏ "ပျံသာပျံပါ ခွပ်ဒေါင်းနီ" သီချင်းကို ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် မန်းထောင် ထောင်တွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာ ကျနော်တို့ကို ရိုက်နှက်ပြီး မြောင်းမြထောင်ကို ပို့လိုက်ချိန်မှာ ဘိုဘိုတယောက်က မန်းထောင်မှာ ဆက်ကျန်နေရပြီး အဲဒီနေ့က နားကို ပိတ်ရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် နားလေးသွားတယ်လို့ နောက်ပိုင်း ကြားရပါတယ်။ ဟိုတလောကတော့ ဘိုဘိုတယောက် ပြန်လွတ်လာပါတယ်။ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာ တနေ့က တွေ့တော့ ခု ထောင်က လွတ်လာပြီး ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ ၈၈ က စပြီး ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေး နှစ် ၂၀ ကာလအတွင်း ထင်ရှားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲဝင် တော်လှန်ရေးသီချင်းတွေကို ခုလူငယ်တွေ ကြားဖူးရအောင် ပြန်ဆိုမယ့် စီးရီးတခုကို လုပ်နေတယ်။ အခု အတီးပိုင်းပြီးပြီ အဆိုတွေပဲ ကျန်တော့တယ်တဲ့။ ဘယ်သူဆိုမှာလဲလို့ မေးတော့ …..
"အဟီး … ကျနော်ပဲပေါ့" … တဲ့။
လူငယ် ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားနဲ့ပြောရင်တော့ "အင်း… မနိုင်ပါလား" လို့ တွေးမိပါတယ်။
(လူကက်ဆက် ဒုတိယပိုင်း ဆက်လက်မျှော်ပါ …။)
Source: (http://www.kaungkin.com မှ …) But copied from Dr Loon Swe's blog
Posted: 26 Dec 2011 12:57 AM PST
Justeru, melihat ke hadapan, maka adalah penting untuk mewacanakan kembali persoalan antara fungsi negara, masharakat warga dan moral ini. Tanpa ada usaha untuk menjernihkan persoalan ini, maka diyakini masharakat-kompleks kita ini akan terus berada dalam kekaburan sistem-bersama. Diam-diam, dalam kekaburan inilah totalitarianisme akan mengambil-alih, sekaligus menenggelamkan batas intersubjektiviti antara masharakat dan negara. Kesannya, psikologi massa yang bersifat totalitarian ini bukan semata mengubah seluruh aktiviti hidup individu; tapi, seperti tegas Hannah Arendt, turut mengubah secara sekata apa yang masharakat fikirkan (malah, rasakan!) dalam benak mereka. Akhirnya, lahirlah apa yang disebut sebagai "the banality of evil"; hingga memunculkan manusia-manusia Eichmann yang baru.
Sehubungan dengan itu, Diskopi sebagai perkumpulan yang cintakan negara, cintakan masharakat, cintakan apa yang dinamakan sebagai wacana sehat, menganjurkan sebuah perbincangan "santai tapi serius" berkenaan persoalan menarik ini. Butirannya adalah:
Dengan itu, Diskopi menjemput semua warga yang "santai tapi serius" untuk turut sama menyumbang fikiran dalam wacana ini. Mungkin saja, sumbangan fikiran dari para audien, itu lebih penting dari panelis. Santai bermakna, hadhirin harus duduk bersila. Tapi wacana tetap dijamin serius.
Posted: 26 Dec 2011 12:55 AM PST
Vid taken on Saturday, October 22, 2011 onaSingapore-bound bus.
The multimedia device is ideal for long travel.
Bring alongathumb drive loaded with your fave songs or movies, then just plug and play!